आहार नर्सिङ आमा
Lactation अवधि, साथै गर्भावस्था को समयमा उनको रहलपहल लागि, सबै भन्दा आमाहरु लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। बच्चालाई भर्खरै गठन आमा आफ्नो पोषण गर्न विशेष ध्यान गर्नुपर्छ, colic र अन्य पाचन ग्रस्त थिएन। , एकदम ठूलो सुत्केरी आमा र बच्चा लागि हानिकारक हुनेछैन भनी उत्पादनहरु सूची छ, त्यसैले एक सताउन सख्त आहार वा कडे प्रतिबन्ध परिचय आहार आवश्यक छैन मा। वफादार आहार नर्सिङ आमा सम्मान यसलाई Suffice, र त्यसपछि स्वास्थ्य crumbs सबै सही हुनेछ।
तर, हामी lactation अवधिमा, सबै एक डिग्री मा आमा द्वारा खाएको वा अर्को बच्चालाई फीड जो स्तन दूध, मा उपस्थित छ भन्ने बुझ्न पर्छ। तसर्थ, एक महिला को पाचन प्रणालीमा कुनै अवरोध बच्चा को गरीब स्वास्थ्य हुन सक्छ। र शरीर एक नर्स प्रवेश कि उत्पादनहरु, ताजा हुनुपर्छ किनभने, न्यूनतम परिष्कृत, कुनै परिरक्षकों, carcinogens वा अन्य कुनै पनि रासायनिक additives समावेश गर्दछ।
त्यो तपाईं सुत्केरी आमा हुन सक्दैन?
मह, चकलेट, कोका, सिट्रस, स्ट्रबेरी र अन्य खाद्य पदार्थ जीवनको पहिलो तीन हप्तामा, एलर्जी बच्चा मा हुन सक्छ कि, crumbs शक्ति सर्किट देखि हटाइनु पर्छ। साथै, यो तेज र नूनिलो खाद्य पदार्थ adversely दूध दुवै गन्ध र यसको स्वाद असर गर्न सक्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ।
यो बोसो को ठूलो रकम खाने द्वारा स्तन दूध बोसो सामग्रीको प्रतिशत मा जानिजानि वृद्धि नगर्न गर्न सिफारिस गरिएको छ, उदाहरण, खट्टे क्रीम, पोर्क र अन्य उत्पादनहरु लागि समावेश। बढती द्वारा स्तन दूध बोसो सामग्री बच्चालाई आफ्नो sucking र पाचन थप खर्च हुनेछ। बोसो राम्रो छ रूपमा मकै र सूर्यमुखी तेल प्रयोग गर्न - एक तरकारी बोसो।
नयाँ उत्पादनहरु दैनिक आहार गर्न बिस्तारै सानो अंश मा, मनमा राख्दै यस्तो नवाचारै मा बच्चा को प्रतिक्रिया हेर्न थपियो गर्नुपर्छ, दिन को समयमा। यदि जलन वा पाचन को कुनै संकेत छन्, त्यसैले, नयाँ उत्पादन अनुमति सूचीमा बायाँ गर्न सकिन्छ।
आहार नर्सिङ आमा: अधिकृत उत्पादनहरु
महिला स्तनपान fillers बिना अन्डा, दुग्ध उत्पादन, पकाएको आलु, पास्ता, तरकारी, नाशपाती, स्याउ, पागल र कुकीहरू खान सक्नुहुन्छ को अवधिमा। फैटी खाद्य पदार्थ, परिरक्षकों, तातो सस र ड्रेसिङ, क्रीम, केक र धूम्रपान खाद्य पदार्थ वेवास्ता गर्नुपर्छ। यो पनि स्पार्कलिंग, मिठाई र पनि unboiled पानी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
सक्षम बनाउँछ आहार स्तनपान आमा पेय हुन सक्छ निम्न: दूध चिया, विभिन्न सुकेका फल, सामान्य फिट र रस (गाजर, स्याउ, दारिम), दुग्ध उत्पादन र 1% को compote बोसो, गाई गरेको दूध (केवल पाकेका वा उसिनेर)। यो पोषण स्थिति बच्चा असर रूपमा हामी, दैनिक रासन को विविधता र शेष बारेमा बिर्सनु हुँदैन।
त्यहाँ गर्भवती महिला र आमा को लागि डिजाइन विशेष भिटामिन परिसर छन्। तिनीहरूले आफ्नो बच्चा पर्याप्त मात्रा मा सबै आवश्यक पोषक गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ बच्चा आफ्नो दैनिक आहार मा अत्यावश्यक पदार्थ पर्याप्त छ भनेर कुनै आश्वासन हुँदा धेरै राम्रो, यस्तो परिसर प्रयोग।
आहार नर्सिङ आमा समावेश एकदम विस्तार र बढीमा एक वा बच्चा अझै पनि नराम्ररी प्रतिक्रिया छ जो उत्पादन दुई निषेधित बीचमा रहन्छ वितरण आहार पछि छैटौं महिना देखि सुरु गर्दै। एक वर्ष पछि, तपाईं breastfeed जारी यदि, तपाईं परिरक्षकों र रंजक बाहेक सबै खान सक्छ।
नर्सिङ आमा को लागि नमूना मेनु
बिहान - दही को 170 G;
नास्ता -250-300 ग्राम लैक्टिक अनाज, दूध 1 अन्डा संग चिया को 200 ग्राम;
12 हेर्छ - फल को रस (200 एमएल);
खाजा - कसा भयो गाजर 300 G बन्दागोभी मिलेर संग सुकेको खुबानी र सलाद को 120 ग्राम, उबला मासु 80 जी, दूध मा आलु को 260 ग्राम, stewed फल कप, राई रोटी 100 G;
खाजा - 40-50 G पटाखे, कम बोसो खट्टे दूध (2.5%) को 150 ग्राम;
खाने - 200 ग्राम घरेलु पनिर Souffle दूध सस 50 ग्राम, एक कप संग कागति, संग चिया रोटी को एक टुकडा;
राति तपाईं दही को 150-170 ग्राम पिउन सक्नुहुन्छ।
एक नरिवल भन्दा उपयोगी?
डाइकिनेशिया पित्त नलिकाहरूका लागि आहार कस्तो हुनुपर्छ?
रक्त समूह लागि आहार:2नकारात्मक
Kalloriynost उत्पादनहरु - आफ्नो शरीर लागि दैनिक आहार चयन गर्न कसरी
प्रजनन र जनावरहरूको विकास। पाठ को लागि सामाग्री
कार्मिक नीति एक उद्यमको सफलताको आधार हो
ओवन मा क्रीम मा एक स्वादिष्ट चिकन खुट्टा कसरी खाना पकाउनु: व्यञ्जनहरु र समीक्षा
"Russlavbank": बैंक ग्राहकहरु को समीक्षा
के "बढाउनु गर्न" यो अर्थ राख्छ? अर्थ र यसको आवेदन स्कोप
Itchy छाती: के भइरहेको छ?
दबाइ 'Orvirem'। प्रयोगको लागि निर्देशन
छोटो कथा "द हंस, पाइक र क्यान्सर।" नैतिक: मामला सँगै गर्नुपर्छ
को Spassky गिरजाघर Staroyarmarochny मा शोभा